Ho hentitra ny Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina: “Aoka hifanaja sy hanara-dalàna ary hahatsapa tena isika” | NewsMada
Nosalorana ny samboady maha ben’ny Tanàna azy Andriantsitohaina Naina, tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, omaly. Naverimberiny tamin’ny lahateniny ny fanarahan-dalàna sy ny fandraisana andraikitra ary ny fifanajana. Mazava ny hafatrafatra amin’ny hitantanany an’Antananarivo Renivohitra.
Nilatsaka avy hatrany ny fepetra maromaro. “Tsy hiandry ela isika fa hiasa avy hatrany. Fepetra vonjimaika horaisina : Hanorina tsena vaovao isika. Tsy hisy aloha ny fandroahana ny mpivarotra amoron-dalana, saingy tsy azo andeferana intsony ny tsy fanarahan-dalàna rehefa misy ny toerana. Ho antsika mpivezivezy eto an-tanàna : fiara, sarety, olona… Aoka hanaja lalàna sy hifanaja isika. Hampiakarina ny sazy ho an’ireo mihoa-pefy…” hoy izy. Nanteriny fa hamboarina ny lalana ary hanara-maso ny fifamoivoizana ny polisy monisipaly. “Hisy lamina manokana amin’izany…”, hoy ihany izy. Momba ny fahadiovana sy ny fanadiovana, notsiahiviny fa efa eo ireo kamiao sy dabam-pako.
Harodana ireo trano tsy ara-dalàna…
Horaisina ny andraikitra amin’ny fampitomboana isa ireo mpanadio. Eo koa ny famerenana ho eo an-tanan’ny Cua ny Samva. Ny fanajana ny ora fanariana fako. “Samy tompon’andraikitra isika, manomboka amin’ny fanadiovana ny ao an-tokantrano izany. Harodana ireo trano niorina tsy ara-dalàna eny ambony lakandrano, nampijaly ny maro anisa amin’ny fiakaran’ny rano… Horaisina ny fepetra amin’ny fanotofana tany”, hoy izy.
Niaiky anefa ny tenany fa tsy ho vitany samirery izany. Nanaovany antso avo ireo mpandraharaha namany ka nilazany fa mila azy ireny ny kaominina satria tonga ny fotoana hamaliana soa ity tanàna iombonana ity. “Hiara-miombona antoka ho amin’ny fampandrosoana isika ka hiara-kiasa ao anaty fanarahan-dalàna”, hoy izy.
Nitodika amin’ireo mpiasan’ny kaominina ny ben’ny Tanàna, taorian’izany.
Mandray karama nefa tsy miasa
Nanafatrafatra ny mba ho mendrika sy ho fitaratra. Nanteriny fa haverina amin’ny hasiny izy ireo ka ho mendrika izany maha mpiasan’ny Cua azy izany. “Misy olona mandray karama ato nefa tsy miasa. Omena 10 andro hametrahana fialana fa raha tsy izany, ho avy ny sazy… Averiko hatrany fa madio isika miditra eto. Madio isika mivoaka eto ”, hoy izy.
Namehezany ireo rehetra ireo ny filazany fa tsy fotoan’ny andrankandrana intsony izao ary mitaky vokatra haingana mipaka any aminy ny vahoaka.
Hanova ny tantara manomboka izao
Nanentana ny rehetra hiaraka aminy hanova ny tantara sy hamerina ny hasin’Antananarivo. Nialoha izany ny nisaorany ireo rehetra, indrindra fa ny vahoakan’Antananarivo. “Ankasitrahana ianareo nifidy ahy na tsia… Fotoana iombonana izao. Isaorana ianareo mpanao politika nampandefitra ny hambom-po”, hoy izy. Tazana teny an-toerana rahateo ireo fikambanana sy antoko politika sasany ary anisan’izany ireo depiote Tim teo aloha. Nohitsiny fa tsy manam-pahavalo afa-tsy ny fako, ny fihotsahan’ny tany, ny tanàna maizina, ny tsy fandriampahalemana, ny fitohanan’ny fifamoivoizana ary ny fahantrana sy ny tsy fanarahan-dalàna ny tenany.
Hisy fanadihadiana ny fitantanana
Efa vita ny maraina ny famindram-pahefana sy fitantanana teo amin’ny ben’ny Tanàna vaovao, Andriantsitohaina Naina sy ny teo aloha, Ravalomanana Lalao. “Nilamina izany ary nifampitso-drano izahay… Tokony hatao sy efa fanao ny fanadihadiana ny fitantanan’ny teo aloha fa tsy hoe amin’ny fiovana fitondrana fotsiny ihany. Manampy ny mpitantana vaovao izany… Laharam-pahamehana avokoa ny rehetra. Hiasa avy hatrany izahay ka eo am-panomanana ny fivoriana maika ho an’ny filankevitra, amin’ny herinandro, hanomanana ny asan’ny kaominina”, hoy ny mpitantana vaovao, Andriantsitohaina Naina.